တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့သည် ခေတ်သစ်စီးပွားရေးနှင့် လုပ်ငန်းများတွင် မည်မျှအရေးပါသနည်းဆိုခြင်းကို မေးခွန်းထုတ်နေကြသည့်အချိန်ကို ရောက်လာနေပြီဖြစ်သည်။ “ဘွဲ့ရမှတတ်သလား၊ ဘွဲ့ရမှ အလုပ်ခန့်မယ်ဆိုတာ သဘာဝကျသလား” ဟူ၍ လည်း မေးခွန်းတွေ ထုတ်လာကြသည်။ သူတို့က ဘာနှင့် ထောက်ပြကြသနည်း။ ကမ္ဘာကျော်သူဌေးကြီးတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေနှင့်ထောက်ပြကြသည်။ “ဘီလ်ဂိတ်စ်၊ အော်ဖရာဝင်းဖရေး၊ မိုက်ကယ်ဒဲလ်၊ စတိဂျော့၊ မာ့ခ်ဇပ်ကာဘတ် ဆိုတဲ့သူတွေ ဘွဲ့ရသလား” သူတို့မေးမည်ဆိုလည်း မေးစရာဖြစ်သည်။
အနာဂတ်တွင် ဘွဲ့ဆိုသည်မှာ တစ်ခုတည်းနှင့် လုံလောက်ချင်မှ လုံလောက်မည်ဖြစ်သလို၊ ဘွဲ့ဆိုသည်မှာ အရေးမပါသည့်အသွင်ကို ဆောင်ကောင်းလည်း ဆောင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မကြာသောကာလတွင် စက်ရုပ်တွေက လူသားတို့နေရာကို ဝင်ယူပြီး လုပ်ကိုင်ကြပေတော့မည်။ လူသန်းရာနှင့်ချီပြီး အလုပ်ပြုတ်နိုင်စရာအကြောင်းတွေ ရှိနေသည်။
လူတိုင်း တက္ကသိုလ်ပညာသင်ယူနိုင်သည့် အနေအထားမရှိပါ။ လေးနှစ်တာ တက္ကသိုလ်သွားတက်ရမည်ဆိုခြင်းမှာ ဘဝရပ်တည်ရေး ကြိုးစားရုန်းကန်နေရသူများအတွက် မလွယ်ပါ။ ထို့ပြင် လေးနှစ်တက်ပြီး ဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ကလည်း အနာဂတ်တွင် ရာထူးတိုး၊ အဆင့်တိုးရန်အတွက် မသေချာတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်မွမ်းမံသည့်သင်တန်းများ၊ အဆင့်မြှင့်သည့် သင်တန်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သင်တန်းများလည်း ပြန်လည်တက်ရောက်ရန် လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်လာနိုင်ပါသည်။
အနာဂတ်တွင် ဝန်ထမ်းတွေကို မည်သို့အဆင့်မြှင့်မည်နည်း။ ဘွဲ့မရှိ၊ လက်မှတ်မရှိသေးသူများကို မည်သို့ မွမ်းမံသင်တန်းတွေ ပေးကြမည်နည်း။ မည်သို့ ဘွဲ့တစ်ခုခုရအောင် ကြံဆောင်ပေးမည်နည်းဟု မေးခွန်းများ ထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။
ကံကောင်းသည်မှာ “အင်တာနက်” ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ကံဆိုးသည်မှာ ထိုအင်တာနက်ကို မည်သို့ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရမှန်း မသိကြခြင်းဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် Coursera (https://www.coursera.org/) ဆိုသည့်နေရာတွင် လေ့လာစရာတွေမကုန်နိုင်လောက်အောင် အခမဲ့လေ့လာနိုင်သည်ကို သိပါသလား။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက ဖွင့်ထားပေးသည့် ထိုလိုင်းသည် အွန်လိုင်းသင်တန်း Massive Open Online Courses (MOOCs) အဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် ထိုလိုင်းကို အသုံးပြုနေသူပေါင်း ၂၈ သန်းကျော်ရှိသည်။ ပို့ချနေသည့် သင်တန်းပေါင်းကလည်း ထို Site ထဲတွင် ၂၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။ အခမဲ့လေ့လာနိုင်သလို၊ အခပေးလေ့လာရသည် ဆိုလျှင်လည်း အလွန်နည်းပါးသည့်ပမာဏလေးဖြင့် ပေးကာ လေ့လာနိုင်သည်။ ပိုက်ဆံပေးရသည်ဆိုရာတွင်လည်း သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်လိုအပ်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုလိုင်းပေါ်တွင် ပို့ချပေးနေသည့် တက္ကသိုလ်များမှာ ဟားဗတ်နှင့် စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ ဆရာကြီးများဖြစ်သည်။ ထိုတက္ကသိုလ် မသွားရဘဲ ထိုတက္ကသိုလ်မှ ဆရာကြီးများ၏ ပို့ချသောသင်ခန်းစာများကို ကောင်းစွာလေ့လာနိုင်မည်။
အခြားလေ့လာစရာ အကြောင်းအရာများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် Website များကို ညွှန်းချင်ပါသေးသည်။
နောက်ထပ်ညွှန်းချင်သည့် လေ့လာစရာ Website မှာ Udacity (https://www.udacity.com/) ဖြစ်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို လေ့လာလိုက်စားလိုသူများ၊ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့် စက်ရုပ်နည်းပညာကို လေ့လာလိုက်စားလိုသူတွေအတွက် အားကိုးအားထားဖြစ်စေမည့် နေရာဖြစ်သည်။
edX (https://www.edx.org/) သည် MIT နှင့် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တို့က ထူထောင်ထားသော Website ဖြစ်သည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာလေ့လာစရာများ၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့လာစရာများ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဘာသာစကား၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာပညာရပ်များ၊ လူမှုရေးပညာရပ်များ လေ့လာ၍မကုန်နိုင်လောက်အောင် တင်ပေးထားသည်။ ကိုယ်သိချင်၊ လေ့လာချင်သည်ကိုလည်း အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားသည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များကို သီးသန့်လေ့လာလိုသူများအတွက် Alison (https://alison. com/) ကိုလည်း ညွှန်းချင်သည်။ ထို Website ကို Google နှင့် Macmillan တို့က အထောက်အပံ့ပေးထားပြီး သင်တန်းများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် လေ့လာစရာများကို ဖော်ထုတ်ပေးထားသည်။ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် လေ့လာနိုင်သည့် ပညာရပ်များမှာ နည်းပညာ၊ ဘာသာစကား၊ သိပ္ပံ၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ သင်္ချာစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ပညာကို သီးသန့်အချက်အလက်စုံလင်စွာ၊ တင်ပြမှုစုံလင်စွာဖြင့် လေ့လာသင်ယူချင်သူများအတွက် Khan Academy (https://www.khanacademy. org/) ကို ညွှန်းချင်ပါသည်။ YouTube မှာ ဗီဒီယိုသင်ကြားချက်များကိုလည်း ဤလိုင်းထဲတွင် ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်သည်။ ပညာရှင်များစွာ၏ စေတနာထားကာ အခမဲ့သင်ကြား ပို့ချချက်များမှာ ပညာကို ရတနာသိုက်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရသလို ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါလိမ့်မည်။
နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ကြီးများက ပါမောက္ခကြီးများ၊ ပညာရှင်ကြီးများ၏ ပို့ချချက်များကို လေ့လာချင်သူများအတွက် Harvard Extension’s Open Learning Initiative (https://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative), Carnegie Mellon’s Open Learning Initiative (http://oli.stanford.edu/courses/), MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/ index.htm), Open Yale Courses (https://oyc. yale.edu/) များကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာစေ လိုပါသည်။
နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ကြီးများမှ ပို့ချနေသည့်သင်ခန်းစာများကို အံ့အားသင့်စရာ လေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စမတ်ဖုန်းသုံးသူများဆိုလျှင် Duolingo (https://www.duolingo.com/) ဆိုသည့်လိုင်းကို ကောင်းစွာသိကြမည်ထင်သည်။ ဘာသာစကား သီးသန့်လေ့လာလိုသူများအတွက် ထိုလိုင်းက ကောင်းစွာ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သည်။ Learn anytime, anywhere ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ဘာသာစကားများကို ပို့ချပေးနေသည်။ Duolingo တွင် ယနေ့ဆိုလျှင် ကမ္ဘာအနှံ့ သန်း ၂၀၀ ခန့်မှတ်ပုံတင်ပြီး သုံးစွဲနေကြသည်။ ဘာသာစကား ၆၈ မျိုးဖြင့် လေ့လာနိုင်သည်။
စာဖတ်ဝါသနာပါသူတွေအတွက် နိုင်ငံခြားမှာစာအုပ်များကို အခမဲ့ဖတ်ချင်လျှင် Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org/) ကို ညွှန်းချင်သည်။ ထို Site ထဲတွင် အခမဲ့ e-Book ပေါင်း ၅၆,၀၀၀ ကျော်ပေးထားသည်။ Open Library (https://openlibrary.org/) တွင်လည်း အခမဲ့ e-Book တွေ ပေးထားသည်။ Google Books (https://books.google.com/) တွင် ကိုယ်ကြိုက်သည့်စာအုပ်ကို ရိုက်ရှာနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့စာအုပ်ပေါင်းများစွာကို e-Book အဖြစ်တင်ပေးထားသည်။ အခမဲ့စာအုပ်ကဏ္ဍတွင် နောက်ဆုံးထွက် စာအုပ်တွေကိုပင် ဖတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားသည်။
ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နှင့် ကုတ်ရေးနည်းတို့ကလည်း ခေတ်မီလေ့လာစရာ ပညာရပ်များဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားမှာ ဘာတွေသင်နေသည်။ ဘာတွေလေ့လာနေကြသည်ကို သိလိုလျှင် Codecademy (https://www.codecademy.com/) ထဲကို သွားရောက်လေ့လာစေလိုသည်။ ထို Site ထဲတွင် ပညာရှင်များ၏ လွယ်ကူလေ့လာကွန်ပျူတာကုတ်ရေးနည်း ပို့ချချက်များကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ Free Code Camp (https://www.freecodecamp.org/) နှင့် HackerRank (https://www.hackerrank.com/) တို့သည်လည်း အဆင့်မြင့် ကုတ်ရေးနည်းများကို လေ့လာလိုသူများအတွက် အားထားစရာနေရာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အခြား သိပ္ပံပညာရပ်အတွက် လေ့လာစရာ ပို့ချချက်များမှာ -
ခေတ်သစ်တွင် နည်းပညာက လူသားကိုများစွာအကျိုးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဆိုသည်မှာ Facebook လောက်သာ မှတ်ယူနေကြရမည့်ခေတ်မဟုတ်တော့ပါ။ လိုလျှင်ကြံဆ နည်းလမ်းရ ဆိုသလို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး လေ့လာနိုင်၊ ပညာယူနိုင်သည့် ခေတ်ဖြစ်လာသည်။ ယူချင်စိတ်ရှိရန်သာလိုသည်။ ပညာဆိုသည်မှာ ကိုယ့်အိတ်ထဲတွင် သို့မဟုတ် ကိုယ့်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတွင် ရှိနေသည်ဆိုခြင်းကို မေ့မထားသင့်ပါ။ တက္ကသိုလ်သွားမှ ပညာရမည့်ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ပါ။